Guddoomiyaha Xisbiga UCID oo ka hadlay sidii loogu soo dhaweeyey Magaalada Hargeysa | Somaliland.Org
February 24, 2010	Hargeysa (Somaliland.Org)- Guddoomiyaha Xisbiga Mucaaradka ah ee UCID ayaa shacabka Somaliland, gaar ahaan kuwa ku dhaqan Magaalada Hargeysa uga mahad-naqay soo-dhawayntii ballaadhnayd ee ay ku qaabileen markii uu shalay ku soo laabtay Hargeysa.
Guddoomiyaha oo Warsaxaafadeed ka soo saaray Hargeysa, ayaa sidoo kale soo-dhawayntii shacabka ku tilmaamay mid ka turjumaysa sida ay dadku uga horjeedaan siyaasadda Xukuumadda iyo Xisbiga UDUB.
Warsaxaafadeedkaas oo dhamaystirani wuxuu u dhignaa sidan;
“Ugu horayn waxaan ugu mahad naqayaa taageerayaasha, iyo hogaanka sare xisbiga UCID, Dadwaynaha Reer hargaysa iyo masuuliyiinta xisbiga kulmiye sidii sharafta iyo maamuuska lahayd ee taariikhiga ahayd ee ay ii soo dhaweeyeen taaasoo xoojisay kalsoonidii aan hore u qabay inay guusha doorashada Madaxtooyada Aan hanan doono haddii alle yidhaahdo.
Aniga oo muddo saddex bilood ah ka maqnaa dalka hooyo ujeedada safarkayguna ahaa safar shaqo oo waliba boqolkiiba sideetan 80% danta qaranka ay ku salaysnayd.
Waxaan socdaallo ku marnay haddaanu nahay hogaanka sare ee xisbiga UCID siddeed dal (8 dal) oo kala ah cariga ingiriiska UK, Sweden, Belgium, Norway, Holland, Germany, iyo Finland, dhamaantood dalalkaasi waxay ka midaysnaayeen cabasho ay ka muujiyeen dedaal la’aanta iyo xidhiidh la’aanta soomaaliland iyo sidday u taageersan yihiin nabadda iyo dimuqraadiyada uu shacbigeenu ku tallaabsaday.
Waxay giddigood walaac ka muujiyeen dib udhaca joogtada ah ee ku dhacay doorashadii madaxtooyada ee dalka, oo wax tar badan oo wax u tari lahaa dadka iyo dalkaba ku xidhan tahay,iyagoo digniina ka bixiyay inaan doorashada shacbiga dib u dhac danbe ku iman.
Dawladahaas oo dhami waxay ballan qaadeen inay taageero buuxda siin doonaan doorashooyinka, Doorashada ka bacdina ay mawqifka qadiyada soomaaliland ka taagan yihiin dib u qiimayn doonaan,rajaynayaana inay ka soo baxdo doorashada dawlad shaqaynaysa oo kalsooni buuxda ka haysata shacbiga
Waxay nagu booriyeen in nabad galyada iyo xasiloonida la adkeeyo.
Dawlada SWEDEN waxay hadda ay bilowday inay innoola macaamisho inaynu gaar ka nahay wixii la odhan jiray Soomaalia iyada oo hirgalisay markii ay haysay madaxtooyada Yurub 6 bilood ee u danbaysay 2009 kii, inay warqadaha rasmiga ah ee ka soo baxa midawga yurub lagu qori jiray Somaliland
Wadanka GERMANY waxa bisha soo socota badhtankeeda soo dirayaan wafti ka socda hay’adii GTZ , oo qiimaynaysa sidii dib loogu dhisi lahaa machadkii farsamada gacanta ee Burco iyo sidii magaalada Burco loogu samayn lahaa haamo kayd ah oo biyaha kaydiya taasoo ilaa hadda magaaladu aanay lahayn.
Wadanka FINLAND oo waftigiisu hore u yimi wuxuu balan qaaday inay tababaro siindoonaan Police-ka Soomaaliland,sirdoonka Somaliland, iyo immigration Somaliland iyaga oo islamarkaana 2 milyan doolar soomariyay hay,adda UNICEF si ay ceelal biyoodyo ugu samayso reer guuraaga gobolada Togdheer , Sanaag iyo Sool ee biyo la’aantu ku soo noqnoqoto .
Wadanka NORWAY waxay keenayaan laba markab oo raadaal leh oo xeebaha Somaliland ka ilaaliya budhcad badeedka iyo sunta lagu aaso badda hoosteeda iyo kaluumaysatada bilaa sharciga ah, sidoo kale waxay tababar siinayaan ciidanka ilaalada xeebaha.
Mudanayaasha ka tirsan baarlamaanka midawga Yurub ee taageera qadiyada Somaliland waxay balan qaadeen inay mooshin horgayn doonaan baarlamaanka Yurub si loo ictiraafo Somaliland doorashada ka bacdi .
Waxaan dhamaan u mahad naqayaa jaaliyadaha iyo madaxda laamaha yurub ee xisbiga UCID ee dalalkaas ee noo suurta galiyay inaanu hawlahaas qaran soo qabano,isla markaasna yididiilo fiican iyo midnimo hor leh muujiyay.
Waxay jaaliyadahaas oo dhami muujiyeen werwerka ay ka qabaan hogaanka UDUB ee maanta dalka hogaaminaaya,iyagoo werwer ka muujiyay sida dalku ku danbayn doono haddii maamulka UDUB soo noqdo inshaa allaahu ma soo noqonayee.”
Previous PostDacwad u dhaxaysa Qoysas ka soo kala jeeda Itoobiya iyo Soomaaliya oo ka socota BurcoNext PostGuddiyo ka tirsan Golaha Guurtida oo maanta doortay hoggaan cusub	Blog